Clear ကို ROOM တွင် PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:Clear ကို ROOM တွင် PVC တံခါး,Clear ကို ROOM တွင်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး,PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး > Clear ကို ROOM တွင် PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး
1. အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးများအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အပူ-ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချချမ်းတုန်လေကြောင်းဆက်ပြီးအအေးစတိုးဆိုင်အခြေအနေများဖြစ်ပါသည်, ဦးစားပေးအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းထားသောကုန်ကျစရိတ်ကိုထိရောက်သော insulator တွင်လည်းအတားအဆီးပေးပါ။
2. PVC မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုစွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်ကြီးမားသောငွေရေးကြေးရေးငွေစုအာမခံပါသည်။
PVC roller ရှပ်တာမြန်နှုန်းမြင့်တံခါး 3. ထူးချွန်ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်လင်းမြင်သာမှုထမ်းများနှင့်အလုပ်ရှုပ်နေ access ကိုဒေသများရှိ operating မိုဘိုင်းအသွားအလာနှစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဘေးကင်းလုံခြုံမှုသေချာ။
4.high မြန်နှုန်းတံခါးကိုချက်ချင်းဖုန်မှုန့်, အငွေ့နှင့်ဆူညံသံအဆင့်ဆင့်လျော့ကျစေပါတယ်။
တာရှည်ခံ 5. non-မီးလောင်လွယ်အလွယ်တကူထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်သန့်ရှင်း။
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး PVC ကုလားကာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Clear ကို ROOM တွင် PVC တံခါး Clear ကို ROOM တွင်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး ဂိုဒေါင် PVC တံခါး internal ဂိုဒေါင် PVC တံခါး PVC ဂိုဒေါင်တံခါး ဂိုဒေါင် Chilled တံခါး auto-ပြုပြင် PVC ဇစ်တံခါး